PVC ကြမ်းပြင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများဘာတွေလဲ? - ZD ကြမ်းပြင်ကျွမ်းကျင်သူ
နေအိမ် > PVC ကြမ်းပြင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများဘာတွေလဲ?
PVC ကြမ်းခင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ polyvinyl chloride ဖြစ်ပြီး၎င်းနောက်အပူခံနိုင်ရည်၊ မာကျောမှုနှင့်ပြွန်နိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းထည့်သည်။ လူအများကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ယနေ့လူကြိုက်များသောဒြပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
PVC ခင်းသည်ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပလပ်စတစ်ကြမ်းပြင်ကိုကြီးမားသောအမျိုးအစားဟုခေါ်သည်။ ၎င်းတွင် PVC ကြမ်းပြင်လည်းပါသည်။
အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ polyvinyl chloride ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ PVC ကြမ်းခင်းကိုနှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်။ တစ်ခုမှာတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာခြင်း၊ အခြားတစ်ခုမှာပေါင်းစပ်ထားသောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအပေါ်ဆုံးအလွှာသည်စင်ကြယ်သော PVC ပွင့်လင်းသောအလွှာဖြစ်ပြီးပုံနှိပ်ထားသောအလွှာနှင့်အမြှုပ်အလွှာကိုအောက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ "ပလပ်စတစ်အခင်း" ဆိုသည်မှာ polyvinyl chloride ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအခင်းကိုဆိုလိုသည်။
စျေးကွက်ရှိကုန်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးကွက်တွင် PVC ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သောပစ္စည်းများအများအပြားရှိသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ရုံသာမက၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်မြင့်မားသည်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ လက်ရှိတွင်ကော် - PVC ကြမ်းပြင်ကိုသော့ခတ်၊ သံလိုက်နှင့်ကော် - သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ဤအမျိုးအစားသည်တပ်ဆင်ခကိုလျှော့ချပြီးသုံးစွဲသူများကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် PVC ကြမ်းခင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သောမိမိကိုယ်ကိုနစ်မြုပ်။ ကော် - မရှိသောကြမ်းခင်းသည်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုပိုင်ရှင်နှင့်အတူရွေ့လျားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကြမ်းပြင်သည်ကော် - မရှိသောကြောင့်ဖယ်ရှား။ ရွှေ့ပြောင်းရန်အဆင်ပြေသည်။ ။
PVC ကြမ်းခင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအများပြည်သူအလွန်နှစ်သက်ပြီးယခုအခါနိုင်ငံခြားအလှဆင်စီမံကိန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာကြသည်။ ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကို ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းက ၀ င်ရောက်စပြုခဲ့သည်။ စီးပွားရေး (ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ လေဆိပ်များ)၊ ပညာရေး (ကျောင်းများ၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ အားကစားရုံများ)၊ ဆေးဝါးများ (ဆေးဝါးစက်ရုံများ၊ ဆေးရုံများ)၊ , အသုံးပြုမှုကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တိုးပွားလာနေသည်။
PVC ကြမ်းပြင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများဘာတွေလဲ? ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ
SPC ကြမ်းပြင်ကိုအများအားဖြင့် calcium အမှုန့်နှင့် polyvinyl chloride တည်ငြိမ်မှုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအခင်းပစ္စည်းများကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်သော Hard SPC အတွင်းပိုင်းကြမ်းပြင်ဖြစ်သည်။ SP...
SPC ကြမ်းပြင်ကိုအများအားဖြင့် calcium အမှုန့်နှင့် polyvinyl chloride တည်ငြိမ်မှုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအခင်းပစ္စည်းများကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ SPC ကြမ်းပြင်သည်အဓိကကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအဖြစ်ကယ်လစီယမ်အမှုန့်မျာ...
ပထမ ဦး စွာအစိုင်အခဲသစ်သားကြမ်းပြင် ပြောစရာမလိုပါ၊ အစိုင်အခဲသစ်သားကြမ်းခင်းများသည်အိမ်များတွင်အမြဲလိုလိုဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်းလူများစွာသည်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျကြသည်။ အမှန်မှာကျွန်ု...